Caalamiyaynta, Dejinta, Dejinta, Iceland iyo Tarjumaadda Websaydhka Sawirka Bisadda Jaban | Martech Zone
Caalamiyeynta, Dejinta, Dejinta, Iceland iyo Tarjumaadda Websaydhka Sawirka Bisadda Japan
Monday, May 7, 2007 Khamiis, Juun 18, 2015 Douglas Karr
Macluumaad badan ayaa jira marka ay timaaddo dib-u-dejinta, dejinta iyo codeynta gudaha codsiyada shabakadda. Waxaa sidoo kale jira ismaandhaaf badan oo ku saabsan waxa kasta oo ay ku siiso arjiga shabakadda. Waa tan qaadashadayda…
Marka biraawsar biraawsar uu xiriir la yeesho server-ka websaydhada, wuxuu dhaafayaa wax yar oo doorsoomayaal ah wuxuuna sameeyaa codsiyo dheeri ah, waa kan tusaale
HEL / HTTP / 1.1
Wakiilka Isticmaalaha: Mozilla / 5.0 (Macintosh; U; Intel Mac OS X; en-US; rv: 1.8.1.3) Gecko / 20070309 Firefox / 2.0.0.3
Aqbal: HTTP Aqbal = qoraal / xml, codsi / xml, codsi / xhtml + xml, qoraal / html; q = 0.9, qoraal / banaan; q = 0.8, sawir / png, * / *; q = 0.5
Aqbalaad-Luqad: en-us, en; q = 0.5
Oggolaanshaha-qirashada: gzip, leex
Caalamku wuxuu ka kooban yahay waxyaabo badan:
Goobta: Awoodda lagu aqoonsado luqadda iyo goobta booqdehu ka soo booqanayo. Tan waxaa lagu sameeyaa Codsiyada HTTP halkaasoo booqdaha lagu garto aag. Kiiskeyga, taasi waa en-US. "En" waa Ingiriis "US" waa Mareykanka. Kani waa goob ka mid ah Nidaamkayga Hawlgalka.
Aagagga waqtiga: Awoodda loo habeyn karo aagagga waqtiga. Tan waxaa caadiyan lagu dhammeeyaa adoo dejinaya adeegahaaga Greenwich Mean Time (GMT) ka dibna u oggolaanaya dadka isticmaala inay dejistaan ​​degmooyinkooda GMT.
Calaamadeynta astaamaha: Kani waa kartida lagu soo bandhigi karo xarfaha luqadda si habboon. Way ka duwan tahay deegaanka maxaa yeelay deegaanku wuxuu ii sheegi karaa luqadda iyo gobolka kumbuyuutarka ee codsiga ka sameynaya, laakiin iima sheegi doono luqadda akhristaha ayaa codsaneysa… taasi waa mid u taal akhristaha!
Ogeysiis ku saabsan Header-ka HTTP-ga markii uu biraawsarku codsaday, wuxuu u sheegay server-ka inuu iga codsanayo deegaankeyga (Accept-Language: en-us); si kastaba ha noqotee, waxay sidoo kale u baahan tahay inay u sheegto server-ka waxa loo yaqaan Calaamadaha la codsado (Accept-Charset: Accept-Charset: ISO-8859-1, utf-8; q = 0.7, *; q = 0.7) ISO-8859-1 iyo utf -8 waa labadaba dabeecado la ogolaan karo.
Adduunkan cajiibka ah ee isku-dhafan, degelintu mar dambe ma fareyso luuqad. In kasta oo aan ku suganahay Mareykanka, haddana waxaan gabi ahaanba aqrin karaa luqad kale anigoo adeegsanaya astaamo ka duwan… taasi waa waxa dhaca markaan isticmaalo Google Hindi (Runtii ma isticmaalo Hindi Hindi). Codsigeyga ku saabsan deegaanka iyo dejinta dabeecadda waa isku mid sida markaan codsado Google Ingiriisi bogga, laakiin dhab ahaantii waan quudiyaa bog aanan akhriyi karin sababtoo ah ma lihi dabeecadda. Dhammaantood way soo baxayaan ???????????… Si kastaba ha noqotee, waxaan ku shubi karaa dabeecadda loo dejiyay Firefox (Firefox> Preferences> Advanced> Languages):
Haddii aan ku dhejiyo luqaddaas, ka dib waxaan codsan karaa bogga qaabkiisa asalka u ah oo aan ku soo bandhigaa kumbuyuutarkeyga inkasta oo aagga aan degganahay uu yahay US-US!
Marka… haddii aan ahay arday Hindi ah, oo ku baranaya Ingiriisiga 'Purdue' kuna xirnaanaya via VPN serverka dugsiga, fasax ahaan Australia… waxaa jira 3 goobood oo kaladuwan oo loo baahan yahay in lagu dabaqo arjiga si dhab ah loo caalamiyeeyo - iyo ma jiro ku tiirsan ta kale.
Aaggeygu wuxuu u soo bixi lahaa sidii US-ka, laakiin waqtiga aan waqtigeygu waa Australia, laakiin luuqadda aan ka codsado websaydhka waxay noqon kartaa Hindi. Haddii aan barnaamij ka dhigi lahaa codsigeyga si aan u sameeyo fikradaha iyada oo ku saleysan aagga kombuyuutarkayga, gebi ahaanba waan khaldami lahaa - oo aan ku quudinayo qofka Ingiriisiga ah aagga bariga. Fikrad ahaan, waxaan barnaamij ka dhigan lahaa dalabkayga labada dejinta luuqada iyo waqtiga… laakiin uma maleynayo inay ku saleysan yihiin deegaanka.
Iceland - tusaalaha ugu dambeeya
Waxaan ka jaahil nahay caqabado luqado badan iyo meelo badan ku leh Mareykanka halka aan ku joogno oo dhan ku hadlaa Ingiriisi [sarcasm impused]. Wadamada qaarkood, sida Iceland, in kastoo afka hooyo yahay Icelandic, dadka cajiibka ah ee Iceland waxay ku koraan barashada 3 luqadood! Maaddaama Iceland ay tahay waddan ku yaal bartamaha Yurub iyo Waqooyiga Ameerika, shirkaddoodu waxay ka shaqeeyaan guud ahaan qaaradaha kala duwan, luqadaha, lahjadaha luuqadaha iyo aagag badan oo waqti ka socda miiskooda!
Bogag badan oo Iceland ah ayaa lagu dhisay US English, UK English, Icelandic, Spanish, Spanish, French iyo German! Kaliya qiyaasi sida ay caqabad u noqon laheyd in la dhiso Icelandair's codsiyada websaydhka iyo nidaamka tikidhada… wow!
AFEEF: Waxaan ku faraxsanahay la shaqaynta dadka wanaagsan ee ka yimid Icelandair waxaanan kuu sheegi karaa inay yihiin qaar ka mid ah xirfadlayaal karti iyo saaxiibtinimo badan oo aan ku raaxaystay la shaqaynta. Waa wax fudud dal iyo dad la yaab leh! Booqo booqashada… qaado Icelandair oo hubi inaad booqato Blue Lagoon!
Luqadda iyo codaynta
Xitaa waxaa jira codsiyo kaladuwan oo kaladuwan oo hal luuqad ah oo aan sifiican uwada ciyaarin! Tusaale: Emailka Jabbaan ee ku qoran Shift-JIS wuxuu ka dhigi karaa mid aan la aqrin karin kumbuyuutarka qof Jabaaniis ah oo leh degsiimo loogu talagalay ja-JP maxaa yeelay adeegeeda maaliyadeed ayaa kaliya aqoonsan EUC-JP. Fikrad ahaan, macaamilku waa inuu awood u yeesho dejinta codeynta ay jeclaan lahaayeen iyo sidoo kale luqadda - si fudud u hubinta in koodh-gareynta iyo luuqaddu ay la jaan qaadi karaan waxa macmiilku codsanayo.
Haddii aan jeclaan lahaa inaan aqriyo Jabbaan, waxaa laga yaabaa inaan u xusho labada Jabaaniis ahaan luqaddayda IYO Shift-JIS si aan u qoro si aan ugu muujiyo luqaddaas si habboon. Waa kuwan jahawareer kale oo dheeraad ah oo lagu daro isku-darka… noocyada habayntu waxay taageeraan dhowr luqadood. UNICODE / UTF8 waxay taageertaa daraasiin. Beddelka waa run sidoo kale. Luuqadaha qaar waxaa lagu aqrin karaa noocyo badan oo koodh ah. Haddii taasi aysan macno samaynayn… Waan ka cudurdaaranayaa, waa arrin aad u adag.
Maalin maalmaha ka mid ah waxaan aaminsanahay (rajo) tani inay dhammaan isbeddeli doonto. Waxaan u maleynayaa in nashqadeeyayaashii asalka ahaa ee xeerarka dejintu ay rajeynayeen in isku-darka luqadda iyo luqadda ay noqon doonto waxa loo baahan yahay oo dhan become laakiin waxaan noqonnay kuwa aad u horumarsan. Xusuusnow, inbadan oo tan kamid ah waxaa lasameeyay kahor intaysan jirin internetka. Iyadoo ay soo ifbaxday GIS, laga yaabee inuu qofku dooran karo habayntooda oo GIS ay wax ka qaban lahayd aaga waqtiga iyo macluumaadka deegaanka.
Ku laabo taageerada caalamiga ah. Haddii aad rabto inaad bixiso codsi caalami ah, waxaad u baahan tahay inaad:
Taageer noocyo badan oo dejiyeyn ah, luqado, oo waxay leeyihiin feylasha tarjumaadda si loo muujiyo tarjumaadahaas
U oggolow macmiilku inuu dejiyo luqaddooda, iyo xitaa noocyadooda koodh garaynta, haddii loo baahdo.
Taageerada aagagga waqtiga adoo u oggolaanaya isticmaalayaasha inay tixraacaan aaggooda marka loo eego GMT.
Si taxaddar leh uga faa'iideyso xeerarka deegaanka loc si sax ah MA u muujinayaan waxa isticmaalahaagu uu dhab ahaan codsanayo ama waxa uu akhrin karo.
Tarjumaadda mashiinku wali waa bilow. Halkaas waxaa ku yaal tiro boggag internet ah (iyo WordPress Plugins) kaas oo bixiya tarjumaada mashiinka ee bartaada. Ha isku dayin inaad tan sameyso… waxaa jira laba sababood oo ah:
Haddii tarjumaadda mashiinku shaqeyso, adeegsadaha baaraya bartaada ayaa horey u lahaan doona turjubaan la shaqeeya.
Nuugista tarjumaadda mashiinka.
Ha i aaminin? Waa tan tarjumida Jabbaan ee adiga:
Lagu dhajiyay Faylka Masatsu - nin dude ah oo tan oo sawiro ah bisado ah:
Gelitaanka Blog-ga Jabbaan
- 00: 29: 35 by masatsu
?? Haan ?????
-00: 29: 35 waxaa qoray masatsu
Magaca gacantii gacantii maroodi / maroodigii shalay ka soo muuqday "a / bahalka feedhka bahalka ?? ilaaliye "" ?? Hann ???? ” oo ay weheliyaan / jilaaga raadiyaha Yutaka Mizushima….
? (?) Taasi ma fudud kalluunka loo yaqaan 'cuttlefish'
Sababtoo ah xitaa jilaaga raadiyaha ee feerka, sayid ????? ee a / bisadu waa gobolka shiinaha ee Nagai Ichiro = kubbada masduulaagii shaqaalaha a / the ?? ilaaliyaha ayaa umuuqda dadka hadalada xikmadda leh si fudud u yaqaan.
?????? (dhididka) ee aan sanadkaan gebi ahaanba ilaaway "sirta magaca kooxda gawaadhida super", oo ah wax qabad caadi ah sanadkasta?,
Haddii aan si qoraal ah u qoro sannadkan,
??????? mowlaca ??? (waa sidee?)? madax madax (ma gooyo) Fukami ?? (? ama indho indheyn karnaa?) an / the it it it it that
?????? Iyadoo, waxay noqoneysaa "a can /? /?", Si kale haddii loo dhigo, "kung fu", marka saf la galo oo la beddelo madaxa a / magaca.
Inkasta oo la sheegay inay kordhinayso laba dheeraad ah oo la sheegay inay noqon karto magac noocee ah.
Runta waxaa lagu sheegaa inay tahay "da'da" maxaa yeelay calaamadda walxaha lacagta waa Ag?, In kastoo magaca "the ????" qalin ”the Takaoka? farsamo yaqaan ee ??????? ayaa u maleynayay in dabeecada loo yaqaan "?" waxaa loo adeegsaday ururkii shaashadda qalinka? filimka, haddii ay ugu yeerto xubin dheeri ah.
Si kastaba ha noqotee, waxaan u fakarayaa si isxilqaan ah, in aragtideyda aysan la xiriirin "?" waxaa lagu soo daray a / dabeecadda Shiinaha.
Waxaan hubaa in ka noqoshada qaawan ee tarjumaadani ay bixinayso sida la aqrin karo qaamuus af Ingiriis ah. Waad fahantay galitaanka, sax?
Tags: astaanta astaantabarafkacaalamimaxaliga ahdegaankasoonaha waqtigatarjumaada
Foomka Xiriirka WordPress oo leh Nooca Ilaalinta Spam 2.0.0 Waa la siidaayay!
Google Analytics wuxuu helaa Wajahad Warbixin Wanaagsan (Beta)
May 7, 2007 at 11: 04 PM
ma waxaad u jeedday Purdue?
Hubaal – jilaa dhidid dhidid leh ayaa isweydiinayay sida saxda ah ee loo dhaho waxyaabaha qaar….
May 8, 2007 at 6: 44 AM
Waan hubaa inaan sameeyay! Mahadsanid, Christine!